5G ezubere ịbata Europe na 2020 | Gam akporosis
5G ezubere ịbata Europe na 2020
Ọ bụrụ na i chere na ị kachasị mma inwe 4G na njedebe gị, n'ime afọ 5 ị ga-abụ ihe mgbe ochie na nke ahụ bụ, ọgbọ na-esote nke mkparịta ụka mkpanaka, 5G ga-abịa site na 2020.
Anyị amaghị ma Spain ọ ga-abụ onye ọsụ ụzọ ma ọ bụ na ọ gaghị ebupụta teknụzụ a, mana ọ bụrụ na, n'ime afọ ahụ, Europe ga-enwe ike irite uru site na njikọ ikpeazụ dị ukwuu maka ngwaọrụ mkpanaka.
Agbanyeghị, dịka ị maara nke ọma, enwere mba ndị mepere emepe karịa ndị ọzọ, Europe achọghị ịmeghachi otu akụkọ ahụ mere na 4G, nke, dịka ị maara nke ọma, bidoro ịbata n'ime afọ ndị a gara aga. Ọ bụrụ na anyị eleba anya na Spain, ọ bụ ruo n’afọ gara aga ka anyị hụrụ ọnụego mbụ na ụlọ ọrụ ekwentị izizi ndị kwadoro njikọ a.
Ọfọn, ọ bụrụ na ihe niile na-aga dị ka atụmatụ, Europe jikọrọ aka na China iji weta 5G na 2020. Europe aghaghị ibi ndụ ka a ghara ịhapụ ya dị ka o mere na 4G ma n'ihi nke ahụ, a ga-etinye ha ego 800 nde maka nyocha na mmepe nke njikọta 5G ọhụrụ.
Kedu ihe 5G nwere ike iwetara anyị?
Ọfọn, ọ kabeghị aka ịchọpụta uru niile nke 5G, mana njikọ a na-atụ anya na ọ ga-adị ngwa ngwa ma dịkwa ọsịsọ. Na 5G ga-enwe ike ịnye anyị ihe ruru 20 Gbps na ngwaọrụ mkpanaka anyị. Nke a bụ ọdịiche dị egwu gbasara 4G, nke, dịka ị maara nke ọma, na-enye anyị 1 Gbps taa. Anyị ga-elebara anya iji hụ ka teknụzụ a si pụta, nke ga-erute mba ndị ọzọ dịka United States, Japan ma ọ bụ China n'onwe ya. N'oge a ka nwere, yabụ anyị ga-anụrịrị ụtọ 4G ruo ọtụtụ afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » 5G ezubere ịbata Europe na 2020
Ọ kaara ya mma na ọ na-aga nke ọma, ọ bụrụ na enweghị akụkọ na TV ma ọ bụ redio n'ihi na ọnụego a ...
Zaghachi Peke Danny
uff ogologo oge
Zaghachi juan iquique
Ihe ngosi 240fps dị egwu site na Nexus 6P
Amazon mepere ụlọ ahịa ya n'ịntanetị na Spain